(गोविन्दबहादुर मल्ल ''गोठाले'' बाट पठाईएको)
गोठालेको जन्म वि. सं. १९७९ असार २९ गते ओमबहाल, काठमाडौमा भएको थियो। उनका बाबु सुब्बा ऋद्धिबहादुर मल्ल र आमा आनन्दमाया हुन्। शारदाका प्रकाशक/सम्पादक उनका पिता ऋद्धिबहादुर भाषासेवी थिए भने दाजु विजय मल्ल ठूला साहित्यकार थिए। उनले आई.एस्सी. सम्म पढे। नीजि व्यवसायमा संलग्न रहे।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=गोविन्द_बहादुर_मल्ल&oldid=1000348" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक २१:०७, ५ अप्रिल २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।